Semalt: Grepsr - Plenary Extension Chrome Extension
Grepsr dia sehatra mahavariana mahatalanjona sy tsotra, izay ahafahan'ny mpampiasa manangona sy mandamina isan-karazany data avy amin'ny harato. Mifantoka amin'ireo mpampiasa tsy teknika izy ireo izay vonona handoa ny loka voalohany mba hanangonana ny angona raketiny sy hikarakarana azy ireo amin'ny fomba mahomby. Ity fitaovana fananganana tranonkala dia manome ny tombony ho an'ny mpampiasa azy:
Mamonjy fotoana sy angovo
Ny mpampiasa dia afaka mamoaka angona maromaro avy amin'ny tranonkala isan-karazany tsy mila mampiasa sarotra fitaovana rindrambaiko - grain storage silos prices. Izy ireo dia mila mamolavola ny kalandrie amin'ny alàlan'ny fototra ara-potoana ho an'ny asa fanasarotana. Famaritana rindrambaiko tsotra izany miaraka amin'ny interface mampifanaraka ny mpampiasa azy ho azon'ny mpampiasa teknika. Ankehitriny dia mpanjifa maro no mampiasa ity sehatra ity mba hamoaka vokatra tsara ho an'ny orinasa. Ny Grepsr dia azo antoka fa manome azy ireo ny angon-drakitra marina rehefa mila izany.
mampiasa fitaovana mahomby sy automated asa
mampiasa fitaovana tena mahagaga i Grepsr, ary koa ny fanohanana lehibe sy ny fidirana. Vokatr'izany dia manome sehatra mora ho an'ny mpampiasa azy izany, izay te hampiasa fitaovana manokana mba handraisana zavatra avy amin'ny harato. Ohatra, ity programa rindrambaiko ity dia miresaka momba ny angona B2B, toy ny vidin'ny vokatra, lisitry ny tahiry, anarana,.
Manomeza ireo mpampiasa amin'ny ekipa mpanohana mahagaga
Tsy mora foana ny mitady mpikaroka tranonkala handraisana ny angona rehetra ilainy. Ohatra, raha miezaka manangona ny vidin'ny tahiry sasany avy amin'ny tranonkala izy ireo ary ny tranonkala dia manavao ny rafitra, ny fametrahana ny fitrandrahana dia mitaky fanavaozana. Asa iray izay azon'ny manam-pahaizana Grespr atao tsy misy vola fanampiny.
Misy orinasa maromaro eo amin'ny tsena izay mila mahita sy mandamina ny angon-draketrany, toy ireo masoivoho lehibe sy mpivarotra.Samy ilaina ny antontam-baovao mahazatra ary samy afaka manampy azy ireo ny manam-pahaizana Grepsr. Ankoatra izany, ny orinasa madinika dia mety mila izany fanampiana izany koa mba handikana sy hikirakira ny angona avy amin'ny tranonkala automatique.
Mamolavola tetikasa amin'ny grepsr
Rehefa mamorona tetikasa iray ny mpampiasa dia mamakafaka azy ireo ity sehatr'asa ity ary alefany any amin'ny mpampiasa azy manokana iray (vidin'ny). Raha vao natsangana ny vidiny, dia noforonina ny mpanangom-bokatra, ary manomboka ny fizotry ny fanangonana data. Ireo mpikaroka amin'ny tranonkala dia nampahafantarin'ireo manam-pahaizana Grepsr tamin'ny alàlan'ny fampandrenesana an-telefaona na mailaka.
Ity sehatra famokarana rindrambaiko ity dia mampiasa ny fanamafisam-peo, ka azo antoka fa azon'ny mpampiasa daholo ny fampahalalam-baovao rehetra. Ankoatra izay, mila mahafantatra izy ireo fa amin'ny fotoana rehetra tadiaviny dia afaka manana fifehezana tanteraka ny angon-dry zareo.